Maamulka Galmudug oo ku eedeeyay Dowladda Iiraan inay Taageero Siiso Ururka Ahlusunna |
Maamulka Galmudug oo ku eedeeyay Dowladda Iiraan inay Taageero Siiso Ururka Ahlusunna
purchase sildenafil, purchase clomid. Maamulka Galmudug ayaa ku eedeeyay Dowladda Iiraan inay taageero dhinac walba ah siiso Ahlusunna Waljamaaca ee Gobalka Galgaduud, kuwaasoo Toddobaadkan kula dagaallamay degmada Caabud-waaq Ciidammo oo ka tirsan kuwa Maamulka Galmudug.
Wasiirka Warfaafinta Maamulka Galmudug, Maxamuud Aadan Cismaan oo Maanta kula hadlay Warbaahinta magaalada Cadaado ayaa sheegay in Iiraan ay Kooxda Ahlusunna ku taageerayso waxyaabo badan, kuwaasoo kaalin ka Qaadanaya abaabullo dagaal oo ka dhan ah Galmudug.
“Galmudug waxay caddeynaysaa in Kooxda Sufa [Ahlusunna] ay Xiriir dhaw la leedahay Iiraan, dalkaasoo u fidiya taageero noocyo kala duwan leh, iyadoo dowladda Iiraan ay dan-gaar ah ka leedahay deegaannada Galmudug. Waxaa wax laga xumaado ah in Waqtigaan Xasaasiga ah ee ay shacabka deegaanka isku diyaarinayaan inay Aayahooda ka Tashadaan shaqsiyaad ama kooxo raba inay iska-hor-keenaan Walaalaha Galmudug, balse Galmudug Waxaa ka go’an in Deegaannadeeda la Nabadeeyo, si Shacabka loogu Horseedo Amni iyo Wax-wada-qabsi,” ayuu yiri Wasiirka Warfaafinta Galmudug.
Wasiirka ayaa intaas ku daray. “Waxaana leenahay xilligan deegaanka uma baahna colaad hor leh, mana loo Dul-qaadan doono cid walba oo isku-dayda in Shacabka ay u Horseeddo Dagaallo aan ujeeddo lahayn.”
Sidoo kale, Wasiirka ayaa Bulshada ku dhaqan deegaannada Galmudug ugu baaqay inay la shaqeeyaan Maamulkooda, Wuxuuna Dowladda Federaalka ee Somalia ugu baaqay iyadaa inay Dowladda Iiraan kala hadasho fara-gelinta ay ku Taageerayaan Ahlusunna.
“Bulshada ku nool deegaannada Maamulka Galmudug waxaan ugu baaqayaa inay si dhow ula shaqeeyaan maamulkooda Nabadda, dib-u-heshiisiinta iyo sidii loo Sugi lahaa Amniga, si ay Shacabka u helaan Nabad-galyo buuxda iyo Horumar joogta ah,” ayuu Hadalkiisa ku daray Wasiirka Galmudug.
Isagoo sii Hadlaya ayuu intaas ku daray. “Dowladda Federaalka Soomaaliya waxaan ugu Baaqaynaa inay Dowladda Iiraan kala Hadasho Fara-gelinta iyo Car-qaladda ay ku hayso Deegaanno ka mid ah kuwa Maamulka Galmudug, isla markaana joojiso Taageerada ay siinayso Kooxda Sufa.”
Ugu dambeyn, Wasiirka Warfaafinta Galmudug ayaa ugu Baaqay Culummada ku dhaqan Deegaannada Galmudug inay bulshada ku wacyi-geliyaan ka Qayb-qaadashada Nabadda, Xasilloonida, Xoojinta Amniga, isku-xirnaanta Bulshada iyo Wax-wada-qabsiga.
Si kasta ha ahaatee, Hadalka Wasiirka Galmudug ka tirsan ayaa imaanaya xilli deegaanno ka mid ah Galguduud ay ka jiraan Dhaqdhaqaaqyo ciidan oo u dhexeeya Ciidamada Ahlu-sunna Waljamaaca iyo kuwa Maamulka Galmudug.